Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lomustine (လိုမက်စ်တင်း)
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Lomustine ကိုများသောအားဖြထင့် ကင်ဆာရောဂါများတွင် အသုံးများပါသည်။
Melanoma အရေပြား ကင်ဆာ
Non Hodgkin အကြိတ်ကင်ဆာ
ရိုးတွင် ချဉ်ဆီ ကင်ဆာ
စသည့် ကင်ဆာများနှင့် အခြားသော ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုကြပါသည်။
သင်သိလိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို ဆရာဝန် အားမေးမြန်းပါ။
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Lomustine ကို အစာနှင့် ဖြစ်စေ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေ သောက်နိုင်ပါသည်။ အစာမရှိဘဲသောက်ခြင်းက ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းကို ဖြစ်နိုင်ချေပိုနည်းစေပါသည်။ ဆေးကို အလုံးလိုက်မြိုချပါ။ မဝါးရ၊ မချေရ။
ဆေးကို အရေပြားနှင့် အခြားသော ပစ္စည်းများနှင့် မထိအောင် လက်အိပ်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ပါ။ အရေပြားနျင့် ထိမိပါက လည်း သန့်စင်အောင်ဆေးကြောပါ။
ဆေးကို ၆ ပတ်ကြာမှ တကြိမ်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်ပြီး ဆေးတောင့်များကို အရောင် ၂ မျိုးနှင့် အထက် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ဆေးသောက်ခြင်းနှင့် ပက်သက်သည်များကို ကောင်းစွာနားလည်သင့်သည်။
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Lomustine ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Lomustine ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Lomustine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Lomustine ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Lomustine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Lomustine တွင်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
Lomustine ကို ပြီးခဲ့သည့် ၆ ပတ်အတွင်းသောက်ထားလျှင်
Lomustine သို့မဟုတ် အလားတူဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
ဓါတ်မတည့်ခြင်း၏ ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားရလျှင်
(အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း၊ နို့တိုက်နေခြင်း၊ ကလေးယူရန်စီစဉ်နေခြင်း များရှိလျှင်
အောက်ပါအကြောင်းအရာများသည် သင် သတိပြုသင့်သော အရေးကြီးသည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။
lomustine ကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသော ပမာဏထက်ပိုသောက်ခြင်း၊ သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါဘဲ ၆ လအတွင်း အကြိမ်ပိုသောက်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင့်ကို ရိုးတွင်းချဉ်ဆီနှင့် ပတ်သက်သည့် သေစေလောက်သော ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
lomustine သည် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်းတို့ အများဆုံးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဆရာဝန် အားမေးမြန်းပါ။ များသောအားဖြင့် ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်းများသည် ၂၄ နာရီအတွင်းပျောက်သွားတတ်ကြသည်။ သို့သော် ခံတွင်းပျက်ခြင်းသည် ရက်အတော်ကြာအထိဖြစ်နေတတ်သည်။
lomustine သည် သင့်ကိုယ်ခန္ဓါတွင် ရောဂါပိုးများကို တိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းများကို လျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုဆေးသောက်ထားလျှင် အအေးမိနေသူများ၊ ရောဂါဖြစ်နေသူများနှင့် ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ သင့်တွင် ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
lomustine သည် သွေးမွှားဥ အရေအတွက် ကို လျော့ကျစေသည့်အတွက် သင့်ကို အနာတရဖြစ်လွယ်စေခြင်း၊ သွေးခြေဥစေခြင်းများဖြစ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေရင်း သွေးခြေဥခြင်း၊သွေးထွက်ခြင်း၊ သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်းများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်အားပြောပါ။
lomustine သောက်နေစဉ် ကာကွယ်ဆေးများထိုးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။ သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းပါ။
lomustine သည် အဆုတ်ကိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးသောက်နေရင်း အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းများဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက သင့်ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
lomustine သောက်နေစဉ်နှင့် ဆေးသောက်ပြီး ၆ ပတ်အကြာအထိ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ အဆုတ်နှင့်သွေးစစ်ခြင်း စသည့် လိုအပ်သော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်မှသာ ဆေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်က ချိန်ဆနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးခန်းကို ရက်ချိန်းမှန်မှန်ပြပြီး လိုအပ်သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကို ခံယူပါ။
ကလေးများတွင် lomustine ကို သတိနှင့် သောက်သုံးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုဆေးသည် ကလေးများတွင် အာနိသင်ပိုပြင်းပြီး အထူးသဖြင့် အဆုတ်အသားများကျုံ့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
(ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် B ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ချမ်းတုန်ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာ မပျောက်ခြင်း
အသည်းရောဂါ လက္ခဏာများဖြစ်ခြင်း (ဆီးမဲမဲသွားခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ ညာဘက်ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ မောပန်းခြင်း၊ အရေပြားနှင့် မျက်လုံးများဝါခြင်း)
မျက်လုံးကွယ်ခြင်း၊ မျက်လုံးအမြင်အာရုံများ မကောင်းတော့ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lomustine ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Lomustine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Lomustine ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး အသည်း ၊ အဆုတ် ရောဂါများရှိလျှင်
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
lomustine ကို သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ယခင်က ကုသမှုမခံယူဖူးသောသူများတွင် lomustine 1 30 mg /m2 ကို ၆ ပတ်လျှင် တကြိမ်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ မကောင်းသောသူများတွင်မူ lomustine 100 mg /m2 ကို ၆ ပတ်လျှင် တကြိမ်သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
lomustine ကို အခြားသော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီဆေးများနှင့် တွဲပေးနိုင်ပြီး ဆေးပမာဏကို ဆရာဝန်က သင့်တော်သလို ညှိပေးပါလိမ့်မည်။ ဆေးညွှန်ကြားသူသည် ဆေးပမာဏ 10 mg ခန့်ကို အတိုးအလျှော့လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Lomustine (လိုမက်စ်တင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Lomustine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
100 mg ဆေးတောင့်
40 mg ဆေးတောင့်
10 mg ဆေးတောင့်
Lomustine ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Lomustine. https://www.drugs.com/pro/lomustine.html. Accessed December 1st, 2016
Lomustine (CCNU).https://www.drugs.com/cdi/lomustine-ccnu.html. Accessed December 1st, 2016
Lomustine (CCNU).http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/cancer-drugs/lomustine. Accessed December 1st, 2016.